Mere Train Bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation | Save A Train
Home > Travel Europe > Mere Train Bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation
Mere Train Bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation
Business Travel site Train, Njem ụgbọ oloko, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 11/12/2020)
The polemic on ịzụ vesos ụgbọ ala na Europe bụ a na-agwụcha isiokwu, onye ọ bụla na-nwetara ha onwe ha chere na. ma, na-anyị ọbụna na-ekwu banyere nchekwa, na ọ bụrụ na anyị - ọ bụ ezuru? Safety anyị họọrọ njem mgbe niile kwesịrị-abịa mbụ, and we’re addressing it today. na-emekarị, ndị na-achọkarị ịgakwuru okwu a dị iche iche, dabere na ha onwe ha na-ejegharị ejegharị na-amasị. Ọzọkwa, ọhụrụ ozi ọma anyị na-anụ banyere ihe mberede gburugburu ụwa ihe na-akpata, dị ka nke ọma. Mgbe ị ga-adịkarịghị anụ e a ụgbọ okporo ígwè okuku ebe, ọ na-eme. Dị nnọọ ka ọ na-eme na ikuku, ụgbọ ala, ụgbọ ala na ndị ọzọ na-esi n'aka iga. Bụlagodi, ọnụ ọgụgụ ndị doro anya - na eze, ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ụdịdị nke njem ụbọchị ndị a! Otu larịị nke nchekwa na-aga ikuku okporo ụzọ mgbe niile ọzọ n'aka nke iga-abịa mgbe.
Traingbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ụgbọ njem kachasị dịrị nchebe na mba niile?
No, ọ bụghị. Ọ bụghị ihe niile rails na ụgbọ okporo ígwè na-nke otu àgwà. Mgbe anyị na-ekwu banyere okporo ígwè njem nchekwa, anyị na-emekarị na-ekwu banyere ya na onodu nke a kpọmkwem obodo. n'ozuzu, okporo ígwè njem bụ dị nnọọ mma, ma ọ ka na-emerụ ịlele ala nke mba rails na Njikọta ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ụgbọ okporo ígwè.
Dị ka ọmụmaatụ, dị nnọọ afọ asaa gara aga na U.S. gua 32,367 ụzọ anwụ, 570 ụgbọ okporo ígwè na-anwụ, na 485 ikuku anwụ. Ndị a bụ nanị ike ike nọmba, ma ha na-eme agba a mara mma doro anya na foto na-egosi na ụgbọ okporo ígwè njem na ikuku njem na-ma budata odi mfe karịa ụzọ njem.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem na Europe, lelee a ijuanya ụgbọ okporo ígwè eziokwu.
Geneva na Zurich Ụgbọ oloko
Olee Ihe Ndị kasị nta Safe Pụtara nke Transportation?
Na kwesịrị a ọgba tum tum. egwuregwu (bụghị na e nwere ihe ọ bụla na-akpa ọchị e) dọkịta riri na-ezo aka ọgba tum tum (i.e., na mberede ndị na-agba onye) dị ka “enye onyinye cycles.” O doro anya na, a mberede ndị na-emekarị Ugboro na-egbu egbu na ha na ọtụtụ ngwa donors. ejegharị ejegharị na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ụgbọ oloko na Europe adịghị akpata dị ka ọtụtụ ihe mberede.
Olee Otú M Ga-Chọpụta ndị Train Bụ Otu Onye nke kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation Ugbu a?
Ebe a bụ ụfọdụ n'ime n'elu mere na ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ụdịdị nke njem:
ole na ole ọghọm
Mgbe ma railroads na ụgbọ okporo ígwè na-ọma e-elekọta (i.e., mgbe nile serviced, nọgidere na-enwe, dochie mgbe ọ dị mkpa, wdg), ị ga-adịkarịghị mgbe àmà ọ bụla mberede na nke a pụtara nke njem. Otu n'ime ihe ndị mere bụ na, n'adịghị ụzọ njem, e nwere bụ nanị ụzọ na otu njem n'aka (i.e., ụgbọ okporo) esonụ onye-aga ya na njedebe ikpeazụ. No na-atụghị anya ugbo ala na-abịa ụzọ gị, na-eme ka ị hapụ achịkwa wheel. E nweghị ndị na mberede agbanwerịta ibe na ibe, na ndị ọzọ na-akpata nchekasị na nwere ize ndụ ọnọdụ. Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị mere njem ụgbọ okporo ígwè na-adịgide otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ụdịdị nke njem otú anya.
Luxembourg na Paris Ụgbọ oloko
The Train bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation na Environmental Uru
Ọ bụrụ na anyị tụnyere okporo ígwè na n'okporo ụzọ na ikuku iga, anyị ga-mfe-egosi na Train bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke ationgbọ njem kamakwa ọtụtụ ndị ọzọ adigide karịa njem ọ bụla. Kedu? Ụgbọ oloko adịghị emepụta ọtụtụ CO2 anwuru, na ụgbọ okporo ígwè umu anwuru na-adịghị tọhapụrụ kpọmkwem n'ime elu ikuku. Plus, ụgbọ oloko na-adịghị na-eri nke ukwuu ume ma ọ bụ ohere, na mkpọtụ ha na-na ọkwa ole na ole karịa ndị ọzọ njem ụzọ. Ọtụtụ ndị na-eme njem gburugburu ebe obibi na-ahọrọ ụgbọ oloko dị ka usoro nhọrọ nke njem ha. Njem gburugburu Europe, oke, n'anya eco-ibe nke ụgbọ oloko na ha na nchekwa na-akọ.
E wezụga abovementioned gburugburu ebe obibi uru na na, n'otu oge ahụ, anyị onwe anyị ike uru, bụghị naanị Train bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation ma na-agba ụgbọ oloko na-magburu onwe ya n'ihi anyị n'ozuzu ike.
Banyere COMMUTER ụgbọ oloko, ha na-ekwe ndị na-agba ịnyịnya ka ha:
Bugharịa gburugburu ibu na-eje ije paseji nke ụgbọ okporo ígwè mgbe na-aga n'ihu. Nke a na-enyere ahụ stay mobile
Na-eje ije ala-ndebe-ha ma ọ bụ n'ebe obibi mgbe ha hapụrụ ọdụ. Nke a dị ukwuu n'ihi na ha physique
Were a ụra na-arụ ọrụ ma na-alaghachi n'ọrụ na-enweghị ihe ize ndụ ịbanye na a okuku ugbo ala. Otu ihe dị mkpa nchekwa mgbochi
Enwe oge ntụrụndụ n'etiti isi A na B.. A kediegwu ụzọ iji zuru ike ma na-onwe gị nke a ọjọọ na ọnọdụ
Ụbọchị ndị a, mgbe onye ọ bụla na-arụ ọrụ gabiga ókè ma na-amapụ ha ala oche ka ha oche na-arụ ọrụ na Anglịkan, enwe ụfọdụ jụọla oyi oge n'etiti dị oké mkpa. Inwe ohere zuru ike na a ụgbọ okporo ígwè dị ka ị na-aga aga bụ maa otu n'ime ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ na-ahọrọ ụgbọ oloko.
Ekwu okwu nke na anya ụgbọ oloko, ha bụ a mma nhọrọ njem dị ka ha na-ekwe ụfọdụ Downtime. Inweta si ebe A na mgbe B na 2 awa nke ụgbọelu na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ mma n'ihi na ike gị? Ọ na-aka anyị blog post “Train bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation”? Can your ahụ na uche hazie mberede mgbanwe nke ihu igwe, ikuku ikuku, na ihe ọ bụla ọzọ dị n'etiti? na o siri ike. Nke a bụ ihe mere njem site ịzụ gburugburu Europe enye gị ahu ohere ina-eji na mgbanwe na hazie ha na a ike.
akpa (Safety) uru
Ọ bụghị kpọmkwem a ike ma ọ bụ a na nchekwa uru, ma ibu nchekwa na-arụ a mara mma ịrịba ama ọrụ maka ụfọdụ njem. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na mkpọ ìhè maka njem ma ọ bụ ọ bụghị, ị chọrọ akpa gị na otu ụzọ. Ọtụtụ ndị njem na-anakọta oké ọnụ ahịa arịa, ụmụ obere ihe oyiyi, akwụkwọ, etc. na ha chọrọ ha na-echeta na ha. dị mwute ikwu na, ikuku njem eji mara akpa na nke akpa mebiri emebi nke anaghị eme mgbe ị na-eme ụgbọ oloko. Plus, akpa gị nọnyeere gị mgbe niile, otú ọ dịghị onye pụrụ ịpụnara ya na akpa na-ekwu. Nke a mere na-ekwu banyere ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe ụdịdị nke njem? Anyị na-eche ka.
Train njem bụghị onye ọ bụla cup tii, ma ọ maa bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe iko, na kasị maa mma ndị, oke. Oge ọzọ ị na- atụmatụ gị ezumike ebe, na-atụle na Train bụ Otu Of The kasị dịrị nchebe ụdịdị nke Transportation, egbula oge inye ụgbọ okporo ígwè njem ohere. Ọ bụ ala, ọ dị mma, ọ super maa mma, na ahụmahụ ị ga na-echeta ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na ị na- njem na Europe, kpọtụrụ anyị na https://www.saveatrain.com ka akwụkwọ gị tiketi na-erughị atọ nkeji na-amalite na-ekpori gị mma njem na rails!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ru na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#modesoftravel #mma #safetravel #njem
Europe Top dara oké ọnụ Ụgbọ oloko